AMANZI ETYUWA VS IICHLORINE POOLS PROS AND CONS - AMACHIBI OKUDADA
Eyona amachibi Okudada Amanzi etyuwa vs iiChlorine Pools Pros and Cons
Wamkelekile emanzini ethu etyuwa ngokuchasene namachibi e-chlorine pros kunye ne-cons kubandakanya ukwahluka kweendleko, ukufakwa kunye nokugcinwa. Amanzi etyuwa kunye namachibi eklorine zezona nkqubo ziqhelekileyo zamachibi. Nokuba yiphuli yomhlaba okanye esemhlabeni, sonke kufuneka siyiqonde eyona ndlela yokugcina amanzi acocekile kwaye ekhuselekile.
Nangona kunjalo, xa kuziwa kumanzi etyuwa vs amachibi eklorine, kukho izinto ezahlukeneyo ezilungileyo nezingalunganga eziqwalaselwa ngabantu abaninzi. I-klorine ihlala iyingozi ukuphatha nokugcina. Ingabangela ukucaphuka kwamehlo akho kunye nolusu.
Ke ngoko, abantu abaninzi bakhetha amachibi amanzi anetyuwa. Kungenxa yokuba baqhayisa ngeengenelo ezingakholelekiyo ngaphezulu kwamachibi anechlorinated.
Uhlobo ngalunye lweephuli lunezinto ezithile eziphantsi kunye nezingezantsi omele uziqwalasele ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba uza kuthenga eliphi. Kwaye ukukunceda uphume, esi sikhokelo siqaqambisa amanzi asetyuwa ngokuchasene namachibi e-chlorine pros and cons, kubandakanya nolunye ulwazi olufanelekileyo.
Umahluko phakathi kwaManzi eTyuwa vs Amachibi eChlorine
Iphuli yamanzi echibini kunye neengozi
Iphuli yeChlorine Pool kunye ne-Cons
Guqula i-Chlorine-Pool kwiNdleko zaManzi eTyuwa
Iityuwa zamanzi eTyuwa vs iChlorine Pool yokuFakelwa kweNdleko
Amanzi etyuwa vs I-Chlorine Pool iindleko zokugcina
Ngawaphi amanzi amnandi eTyuwa okanye ichlorine-ichibi?
Ngokwesiqhelo, amachibi e-chlorine amanzi amdaka afika ezingqondweni zabantu abaninzi nanini na xa befuna ukuseta iphuli ngasemva kwabo.
Okwangoku, amachibi amanzi anetyuwa ahlala aziwa ngenxa yemeko yeekhemikhali ephantsi kunye nokugcinwa ngokulula. Nantsi umahluko opheleleyo phakathi kwamanzi etyuwa kunye namachibi eklorine ekufuneka uyazi.
Amachibi aManzi eTyuwa
Ngokungafaniyo nento abantu abaninzi abayicingayo, amachibi amanzi etyuwa awanamanzi olwandle ngokupheleleyo. Banokufuna ukongeza ityuwa emanzini aqhelekileyo echibini ukuya kumanqanaba athile anetyuwa encinci kunamanzi olwandle.
Akunakulungile ukucinga ukuba amachibi amanzi anetyuwa awanayo i-chlorine. Nokuba uyasilela ukongeza ibakala lokuthengisa iklorini kwezi nkqubo zamachibi, ziya kuhlala zineklorine.
Kungenxa yokuba amachibi amanzi anetyuwa athambekele ekwenzeni i-chlorine yawo ngokwendalo ngokusebenzisa i-electrolysis. Yongeza ityuwa ekumgangatho wamachibi kumvelisi wakho wechlorine. Lo matshini uqhuba amanzi anetyuwa ngeepleyiti ezimbini ezibiza ngombane.
Ke, uguqula amanzi anetyuwa ukuba abe sisixa esaneleyo se-chlorine, egcina amanzi ecocekile. Oku kuba lula ukufumana amanzi alungeleleneyo, kwaye ichibi lamanzi anetyuwa liya kufuna ingqalelo encinci kunye neekhemikhali kunamachibi e-chlorine.
Ukufakwa kwamachibi amanzi anetyuwa kuhlala kunzima. Ke ngoko, zibiza kakhulu kunamanzi e-chlorine. Uya kufumana ulondolozo lwazo lubiza kakhulu.
Ngokuphathelele echibini elineklorine, kuya kufuneka wongeze isampulu kwaye ulinganise itafile yeklorine okanye ulwelo. Ngaphandle koko, unokuhlengahlengisa ubunzima be-calcium, i-alkalinity, kunye namanqanaba e-pH emanzini.
Nangona amachibi amanzi anetyuwa aqukethe iklorin, inkqubo yokuyila iklorine yahlukile kuleyo ikwicachi echibini lendabuko. Inkqubo nganye yeephuli icocwe kusetyenziswa into efanayo. Nangona kunjalo, i-chlorine efumaneka kwityuwa yamanzi inokuhluka kuleyo ubuqhele ukuyenza.
Xa kuziwa kufakelo kunye nolondolozo, amachibi e-chlorine alula kwaye axabisa kancinci kunamachibi amanzi etyuwa. Nangona kunjalo, iinkqubo ezineklorini zihlala zifuna ukubekwa esweni okuninzi ukuze zicoceke. Kodwa awuyi kuzifumana zineklorin ephezulu.
Kuya kufuneka ungeze ithebhulethi yeklorini yokurhweba, ulwelo, okanye unamathele emanzini echibini veki nganye. Ukongeza, ichibi le-chlorine lifuna ezinye izinto zokulinganisa i-alkaline ukunqanda naziphi na iziphumo ezinobungozi ze-chlorine.
Ngokwesiqhelo iklorine ikhupha umsi oyingozi, onika ichibi ivumba leklorini, elibangela ukuba bomvu kwamehlo nokucaphuka komphefumlo. Ke ngoko, kubalulekile ukuyigcina ngononophelo ukuze ukhuseleke. Uya kuwafumana la madanyana ane-chlorine ephezulu kunabalingani babo bamanzi anetyuwa.
Yiyo loo nto amanzi eziva erhabaxa kwaye ecaphukisa ulusu, amehlo, kunye neenwele, ikakhulu xa uzisebenzisa rhoqo. Ukuba le nkqubo yeephuli yinto oyithandayo, uyakufuna iimveliso zebhafu kunye neenwele ezinezinto ezizodwa zokususa iklorine.
Ngaphambi kokuba uthenge ichibi lamanzi anetyuwa, nazi izinto ezilungileyo kunye nezibi ekufuneka uzazi:
• Iindleko zokusebenza zemihla ngemihla ziphantsi
• Kuba iiseli zetyuwa ezikhoyo echibini lamanzi anetyuwa zivelisa iklorin kuphela xa ifuneka, kulula ngakumbi ukuyigcina iphuli kunamachibi eklorin.
• Ukuxinana kwe-chlorine esezantsi kwenza ukuba eli chibi likhazimle kwaye likhuseleke kulusu, emehlweni nasezinweleni.
• Uphando lubonisa ukuba amachibi amanzi anetyuwa adla ngokukhuseleka kunamachibi emveli anechlorinated. Banokugcinwa okunzima kunye nokuphathwa kweekhemikhali eziyingozi zeklorine. Ngokufanayo, ukuvezwa kwenkqubo yamanzi eneklorine kunokukhokelela kumngcipheko wexesha elide kwimpilo yakho.
• Amanzi etyuwa amachibi okudada echibini inokuphinda ijonge inkangeleko kunye nokuziva kokubhukuda kwindalo.
• Amanzi eenkqubo zetyuwa ’azive ethambile; kungoko abantu abaninzi bekufumanisa kunqweneleka.
• Ufakelo lokuqala kunye neendleko ezingaphezulu zokubeka amachibi amanzi etyuwa aphezulu, kungoko zibiza kakhulu kunamachibi emveli anechlorini.
• Kuba amachibi ahlala efuna amagcisa anamava ukuba ahlole kwaye alungise iingxaki ezincinci, ezi nkqubo zinzima kakhulu ukubamba kunezinye.
• Ityuwa ingonakalisa izinto ezithile ezenza iphuli. Ukugqitha kwetyuwa kunokubangela ukuvela kombala iphuli yokuqubha . Ke ngoko, kubalulekile ukuba ungasebenzisi izixhobo ezithile, ii-liners, izifudumezi, isibane esingaphantsi kwamanzi, kunye neemveliso zokwakha.
• Amachibi amanzi etyuwa athambekele ekusebenziseni umbane omninzi, ephakamisa amatyala akho okusetyenziswa.
• Ixabiso lokuqala lofakelo liphantsi
• Ifuna iindleko zamandla ezimbalwa
• Ukugqwesa kulungiso olwenzelwe wena
• Ifuna izixhobo ezincinci ukuba zibaleke
• Ukugxininiswa kwekhlorine kuphezulu. Ngenxa yoko banokuba krwada kulusu lwakho, amehlo, kunye neenwele.
• Ibanga ukuphathwa okukhethekileyo kunye nezixhobo zokugcina iikhemikhali eziyingozi zeklorine.
• Iindleko zomsebenzi wemihla ngemihla zinokuba phezulu.
• Ifuna ukubekwa kweliso rhoqo kumgangatho wamanzi
Ukusekelwa kwimingcipheko yezempilo yamachibi e-chlorine, ukuwaguqula kwiinkqubo zamanzi zetyuwa kunokuba yinto efanelekileyo. Kwaye ukuba uyazibuza ukuba iyakubiza malini, eli candelo liya kukunceda.
Kuya kufuneka uhlawule ubuncinci kunye nesixa esona siphezulu se- $ 500 kunye ne- $ 2500 ngokwahlukeneyo ukuguqula inkqubo yakho yemveli yeklorin ibe yichibi lamanzi anetyuwa. Nangona kunjalo, oku kungohluka ngokuxhomekeka kwifayile ye- ubukhulu beephuli zokudada kunye nohlobo.
Ichlorine-echibini inexabiso eliphantsi lokufaka kunye nokufaka ngokubanzi. Kwaye uhlobo lwenkqubo yamanzi ogqiba ekubeni lube nefuthe kwiindleko zofakelo kunye nolondolozo ngokubanzi kunye neendleko zesevisi.
Unokulindela ukuhlawula malunga ne-100 yeedola ngaphezulu kweendleko zokufakwa kwenkqubo yamanzi eklorin njengoko ingadingi zixhobo ezizodwa. Ngokumalunga namachibi amanzi anetyuwa, lungela ukuchitha malunga ne-2500 yeedola kufakelo ngenxa yokuntsonkotha kwayo kunye nemfuno yezixhobo ezizodwa ezinje ngejenali yeklorini.
Amachibi amanzi etyuwa afuna iindleko ezisezantsi zolondolozo lonyaka kunamachibi e-chlorine. Unokuchitha imali eyi-100 yeedola rhoqo ngonyaka ukugcina amachibi amanzi anetyuwa, ngelixa amachibi e-chlorine afuna iindleko zokugcina malunga ne- $ 1000.
Ukuthatha isigqibo sokuba yeyiphi engcono phakathi kwetyuwa yamachibi e-chlorine echibini kunokuba lula kwaye kube nzima ngexesha elinye.
Nangona kunjalo, isigqibo sakho sixhomekeke kwizinto ezahlukeneyo ezinje ngendleko, ulondolozo, impilo kunye nezinye ezininzi. Jonga ukuthelekisa kwethu apha ngezantsi kwaye uthathe isigqibo sokugqibela sokuhambelana neemfuno zakho.
Ulondolozo lwemihla ngemihla olufunwa ngamachibi amanzi anetyuwa aluncinci kuba akukho nto ithengwayo yeklorini okanye enye imichiza yamachibi. Baye bagcine ibhalansi yamanzi etyuwa kangangeeveki ezimbini.
Kwelinye icala, iichlorine-iiphuli zifuna ukugcinwa kwesixhobo esincinci kodwa zininzi izinto ezenziwayo ukuzigcina.
Kuba amachibi amanzi etyuwa anamanqanaba ambalwa e-chlorine kuphela, uya kuwafumana engenawo umsi oyityhefu oyityhefu. Azidingi neemfuno ezizodwa zokugcina, kwaye amanzi ngokubanzi athambile kulusu, iinwele, amehlo, kunye nenkqubo yokuphefumla.
ikhitshi elimhlophe nelimhlophe
Ngokubhekiselele kumachibi eklorine, acaphukisa amehlo kunye nolusu, kubangela ubomvu, ukoma, ukurhawuzelela kunye nokutsha. Iikhemikhali zeklorine zifuna izixhobo ezizodwa zokugcina, kwaye umsi unokuba yingozi xa uphefumla. Oku kunokuba yinyani ngakumbi ukuba unephuli yangaphakathi apho umsi unokwakha khona. Ke, ukuba unovakalelo kwi-chlorine, ichibi lamanzi anetyuwa liya kuba lolona khetho.
Imbuyekezo kutyalo mali
Nangona iinkqubo zamanzi zetyuwa zineendleko eziphezulu zokuqala, zibiza kakhulu ukugcina ixesha elide. Ke, banokuba lolona tyalo mali lubalaseleyo olunokukunika imbuyekezo engcono kuneenkqubo zesiko ezineklorin.
Ngale miba kunye nezinye ezininzi, unokwenza izigqibo ezizizo malunga nokuba yeyiphi eyona ilungileyo phakathi kwamanzi etyuwa vs amachibi eklorini.
Ukuba ujonge ukwenza iphuli yakho ikhona Isoftware yoyilo lokuqubha oko kunokunceda. Ezi nkqubo zivumela umntu ukuba ayile uyilo ngokuchanekileyo kubeko lwasemva kwendlu yakho.
Ucinga ntoni malunga nala manzi anetyuwa ngokubaluleka kunye nokubi? Ngaba unayo intanda xa kufikwa kwiklorin okanye amanzi anetyuwa? Sazise ukuba ucinga ntoni kwicandelo lamagqabaza.
Umama womtshakazi unxiba kunye nobukhulu be-navy blue
yintoni isipho seminyaka engama-40 somtshato